TurnTo: hevitra syndika miaraka amin'ireo mpaninjara ny vokatrao | Martech Zone
Zoma, Jona 9, 2017 Zoma, Jona 9, 2017 Douglas Karr
Ny Syndication dia fomba iray mahomby amin'ny mpivarotra an-tserasera hampiakarana haingana ny haben'ny fanombanana vokatra sy hevitra (hevitra) asehon'izy ireo. Ireo marika, izay mazàna manangona ity atiny novokarin'ny mpampiasa (UGC) voalohany ity, dia dodona ny mpivarotra haneho izany amin'ny tranokalan'ny eCommerce. Amin'ny fizarana ny hevitr'izy ireo amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'izy ireo, ny marika dia afaka manampy ny vokatra hisongadina sy hivarotra tsara kokoa, satria voaporofo fa mampitombo ny varotra ny isa ambony.
Hatramin'izao, ny syndication toy izany dia tamin'ny alàlan'ny mihidy tambajotra. Ny olana dia izao, ity fomba ity dia mitaky ny marika manome ny hevitra sy ny mpivarotra mandray azy ireo hampiasa sehatra iray ihany ary manana fifanarahana ofisialy amin'ny fifanakalozana atiny. Ireo izay mampiasa sehatra hafa dia voasakana tsy ho takalon'ny fifanakalozana, ary ny marika amin'ny tambajotra dia omena vola be avy amin'ny mpamatsy azy ireo ny fidirana amin'ny tambajotra.
TurnTo Networks dia mpamatsy vahaolana atiny ho an'ny mpanjifa manaraka ho an'ny mpivarotra sy marika ambony. Miaraka amina vokatra tsy manam-paharoa misy vokatra efatra vaovao:
Naoty sy hevitra
Fanamarihana momba ny fizahana
TurnTo dia mamoaka atiny misy asa kely kokoa, manome toky fa azo itokisana indrindra, fanondrotana fiovam-po, fanatsarana motera fikarohana (SEO) ary fahitana ara-barotra. Mba hanampiana ny mpanjifa handresy fanamby amin'ny indostrialy maharitra, nampiditra tambajotra misokatra i TurnTo. Open Review Syndication mampitombo be ny fizarana atiny, manamora ny famerenana ny volan'ny famerenana ary manapaka ny "saram-pidirana" mideza takian'ny tambajotra mihidy mahazatra.
miaraka Open Review Syndication, ny marika rehetra izao dia afaka manome fanamarihana ho an'ny mpivarotra amin'ny alàlan'ny TurnTo's Customer Content Suite, na inona na inona fanangonana sy sehatra fitantanana ampiasain'izy ireo. Tsy ilaina ny fampidirana teknika ary ny marika dia afaka manana tsikera nampiana amin'ny tambajotra TurnTo ary aseho amin'ny tranokala eCommerce mpiara-miasa ao anatin'ny iray na roa andro.
Ireo mpivarotra am-pivarotana dia mijery sy mitantana atiny syndicated avy ao anaty dashboard TurnTo ho an'ny fifehezana ny antonony tanteraka sy ny fomba fijeriny ny tatitra. TurnTo dia manome ihany koa API fidirana ka ny mpivarotra mampiasa sehatra hafa - matetika ny rafitra namboarina an-trano - dia afaka misitraka ny syndication famerenana vokatra voalohany ihany koa.
Tsy misy dikany ny tamba-jotra syndication mihidy. Izany dia toy ny fivarotana enta-mavesatra manakarama olona hanangana ny fampisehoana farany azy ireo, ny olona ihany no mivarotra an'io toerana fitahirizana premium io amin'ny orinasa soda ary manangona ny vola. TurnTo's Open Review Syndication dia miorina amin'ny modely hafa. An'ny marika ireo atiny - tokony ho afaka mizara izany izy ireo hanampiana ireo mpivarotra azy. An'ireo mpivarotra an-tsena ny tamba-jotra - tokony ho afaka mampiseho ny tsikera avy amin'ny marika te-hizara izy ireo. Ny asanay dia ny manamora ny fiarahan'ny roa tonta. George Eberstadt, CEO an'ny TurnTo
Ny varotra CPO, izay mivarotra fitaovana mandeha amin'ny herinaratra avy amin'ny marika lehibe rehetra, dia nifamadika tamin'ny TurnTo's Open Review Syndication ary nahazo tombony mahery. Talohan'izay dia nampiasa tambajotra nakatona ilay mpivarotra, ary satria maro amin'ireo marika sy mpanamboatra izay amarotan'ny vokatra CPO no tsy teo amin'ny sehatra anaty tambajotra, dia tsy azon'izy ireo ny sendikan'ny mety ho tsikera, mpivarotra diso fanantenana te handray anjara nefa tsy afaka .
Miaraka amin'ny haitaoan'ny TurnTo, CPO mihoatra ny avo roa heny ny isan'ny marika nahazoana azy ireo atiny syndicated ary nampitombo ny totalin'ny hevitra nasehon'i mihoatra noho ny 250 isan-jato.
Mianara bebe kokoa momba ny turnTo Open Syndication
Tags: BoseCPOVarotra CPOsyndication famerenana misokatraproduct reviewshevitrahevitra syndicatedTurnTo
Ahoana no hampitomboan'ny marketing amin'ny hetsika ny taranaka sy ny vola miditra?